I-Dream D9 Max, ukuhlaziywa kwe-vacuum cleaner yakamuva yerobhothi esebenza kahle kakhulu | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 30/12/2021 10:59 | General, Izibuyekezo
Izicoci zerobhothi seziphenduke enye yezindlu "okufanele" ezijwayelane nobuchwepheshe bakamuva. Lezi zenze intuthuko enkulu kanye nentuthuko kukho kokubili ukusebenza kanye nemiphumela ekwenze kwaba cishe izici ezizimele ezenza usuku lwethu nosuku lube lula kakhulu.
Ngalesi sikhathi Ngidumise igama angikwazanga ukuphuthelwa i-aphoyintimenti, ihlinzeka ngenani elihle lezixazululo ezinevelu elihle lemali kulolu hlu lwemikhiqizo yobuchwepheshe. Sihlaziya i-Dreme D9 Max entsha, isicoci se-robot vacuum esisebenza kahle nemiphumela emihle, Thola nathi futhi uzokwazi ukukala ukuthi kufanelekile ukuthenga kwakho, noma cha.
2 Izici zobuchwepheshe eziyinhloko
3 Ukuzimela nokusetshenziswa
4 Ubuchwepheshe obusetshenzisiwe kanye nombono womhleli
Njengakwezinye izikhathi kanye neminye imikhiqizo yayo, i-Dream iphawula inguquko ekwakhiweni kwayo nasekwakheni ikhwalithi yemikhiqizo yayo maqondana nabanye, iqinisekisa ukuthi intengo yayo elungisiwe ayibonakali ngokwekhwalithi. Sibheke isicoci se-robot vacuum esinezilinganiso ezijwayelekile zemakethe, ukubheja ngobukhulu obungu-35 × 9,6 obuzohlala ku-3,8Kg, Nakuba kuyiqiniso ukuthi imigomo yesisindo kule mishini ayibalulekile kakhulu, ngoba ngeke siyithwale. Intengo yayo izokwenyuka cishe ngama-euro angama-299 kumaphuzu amakhulu okuthengisa. Futhi uma ufuna isaphulelo esengeziwe ungasebenzisa isigqebhezana I-DREAMED9MAX.
Ubukhulu: 35 × 9,6 amasentimitha
Isisindo: I-3,8 Kg
Imibala etholakalayo: Okumnyama okucwebezelayo nokumhlophe okucwebezelayo
Ukuhlanza nokukhuhla kuhlangene
Inebhulashi elimaphakathi eliqinisiwe ngezansi elihlanganisa ubuchwepheshe obuhlukahlukene, kanye nebhulashi eliseceleni elilodwa. Phezulu sithola izinkinobho ezintathu eziyinhloko zokulawula, okuyi-"hump" yakudala manje. ifakwe yiwo wonke amarobhothi anobuchwepheshe be-laser nokulungiswa kwethangi lamanzi. Ngakolunye uhlangothi, ithangi lokungcola litholakala ngemuva komnyango endaweni engenhla, lapho ngokuvamile litholakala kuyo yomibili imikhiqizo ye-Roborock ne-Dremee njalo. Njengoba ubona ezithombeni, sihlaziye imodeli emnyama.
Izici zobuchwepheshe eziyinhloko
Mayelana nokupakishwa, i-Dreme ivamise ukusebenza kahle lesi sigaba, ukunikeza kulesi senzakalo izici ezilula kodwa ezidingekayo: Idivayisi, isisekelo sokushaja namandla kagesi, ibhulashi eliseceleni, ithangi lamanzi eline-mop lifakiwe, ithuluzi lokuhlanza (ngaphakathi kwerobhothi, lapho ithangi likadoti) kanye nemanuwali yeziqondiso. Ngiphuthelwe enye into eshintshayo njengama-mops amaningi, isihlungi esishintshayo noma ibhulashi eseceleni elingena esikhundleni.
Idivayisi inokuxhumana I-Wifi, kodwa njengoba kuvame ukwenzeka kule mishini, kufanele sikhumbule ukuthi izohambisana kuphela ngamanethiwekhi we-2,4GHz. Lokho kusho, sithola uhlelo lwe-nI-LDS 3.0 Laser LiDAR Navigation esebenza kahle, okuzohambisana neyakho 570ml ichibi lokungcola kanye nama-270ml amanzi noma uketshezi lokuhlanza esifuna ukukunikeza, inqobo nje uma luhambisana nakho kokubili idivayisi kanye nephansi lethu okukhulunywa ngalo, into okufanele sibheke yona imanuwali yemiyalelo ngaphambilini.
Ngokuqondene namandla okudonsa, iDreme ibika ngale modeli ye-4000 Pascal pro, amandla aphezulu nasebenza kahle uma kucatshangelwa ukuqhathanisa neminye imikhiqizo yemikhiqizo enenani eliphakeme eliyimbangi. Uma sicabangela amandla okumunca ashiwo sizothola imisindo ekhishiwe ephakathi kuka-50db kanye nengqikithi engu-65db, futhi okuyenza ibe isicoci se-vacuum irobhothi esithule kakhulu uma sicabangela lesi sigaba esithile. Umsindo uzoncika kumaleveli wamandla amane ahlukene esingawaphatha ngohlelo lokusebenza.
Mayelana nokuzimela, sijabulela cishe u-5.000 mAh kumenyezelwe uhlobo, lokhu kuzosinikeza ukuhlanzwa kwendawo yonke Imizuzu engu-150 noma kufika kumamitha angu-200, Iqiniso esingakwazi ukuliqinisekisa ngoba asinayo indlu enkulu kangaka (ngethemba), kodwa ifika cishe nama-35% ekupheleni kokuhlanzwa. Ukuhlanza okunemininingwane emihle, ngaphandle kokweqa esikhathini esedlule futhi okuhlangabezana nokusebenza okungalindelwa kulolu hlobo lokuhlaziya imvelo ngenxa ukumepha imvelo nge-3D (nge-LiDAR) eyenziwa ngezinzwa ezisakazwayo. Ekudluleni kokuqala, njengoba wazi kahle, izohamba kancane, kanti kusukela manje izosebenzisa ngokunenzuzo isikhala nesikhathi ngenxa yolwazi olufundiwe.
Hlela imizila ehlakaniphile
Dala amamephu athile
Hlanza amagumbi athile
Hlanza izindawo ngokuthanda kwakho
Ivimbela ukufinyelela ezindaweni ezithile
Sinakho, kungaba kanjani ngenye indlela, ukuvumelanisa nge I-Amazon Alexa, ngakho-ke usuku nosuku luzoba lula uma nje sibuza umsizi wethu osemsebenzini. Umsebenzi wokuvumelanisa nokuphatha idivayisi uzokwenziwa ngohlelo lokusebenza lwe-Mi Home olutholakala kokubili Android ngokuqondene iOS. Kuzosebenza nalapho singekho ekhaya. Sibonga u smartphone yethu kanye App yethu siqu, singakwazi ukulawula ukuhlanzwa kwekhaya noma yikuphi, sifinyelele kumephu nokuphatha izindawo zokuhlanza.
Ubuchwepheshe obusetshenzisiwe kanye nombono womhleli
Sihlangana eDreme D9 Max ubuchwepheshe obuyinhloko i-Dreame eklame kulezi zinhlobo zemikhiqizo, njenge uhlelo lokulawula umswakama ukuphatha amanzi asetshenziselwa ukuhlanza futhi angalimazi i-parquet, kanye nesistimu yokudonsa ehlakaniphile Ukufukula Ukhaphethi lokho kuzohlukanisa okhaphethi kusukela phansi okuqinile ukuze kulawule ukushuba kwesicoci se-vacuum.
Kufaka phakathi isihlungi se-HEPA esisebenza kahle kakhulu.
Okuhlangenwe nakho kwethu kube kuhle kakhulu mayelana ne-vacuuming, ngamandla, ngaphandle komsindo nemizila emihle eklanywe ngesithwebuli se-LiDAR, njengenjwayelo, ukukhuhla kungaphezulu kwe-mop emanzi okuthi kwezinye izimo kungakha amamaki omswakama phansi kuye ngokuthi impahla oyiqambayo, ngakho-ke sincoma ukuthi uxhumane nomkhiqizi. Ungayithola ngentengo ezosuka kuma-euro angama-299 ngokunikezwa okuthile, ube inketho ehlakaniphile ngokwezinga layo / isilinganiso samanani.
Kuthunyelwe ku: December 30 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: UJanuwari 4 we-2022
Imephu ehlakaniphile nokusebenza kahle okuphezulu
Amandla okudonsa amahle
Umsindo ophansi nemiphumela emihle
Ukukhuhla ngezinye izikhathi kushiya amamaki
Kuyashoda ukuthi afaka ama-elementi engeziwe azoshintshwa
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Dream D9 Max, ukuhlaziywa kwesicoci se-vacuum irobhothi esisebenza kahle kakhulu
Isipho sokwethula: IBlackview BV8800 ngama-euro angama-225 kuphela